Aqalka Cad oo galay xaalad mugdi ah | Entertainment and News Site
Home » News » Aqalka Cad oo galay xaalad mugdi ah
Aqalka Cad oo galay xaalad mugdi ah
daajis.com:- Lix bilood ayaa laga joogaa markii uu xilka la wareegey madaxweynaha Maraykanka Donald Trump , waxaana xilka uu ka eryey ama cadaadis dartiis isaga tagay dad badan oo maalin kasta ay tiradoodu sii kordheyso, waxa ay xilal muhiim ah ka hayeen Aqalka Cad iyo guud ahaan Maraykanka.
Sheekooyinkii ugu waaweynaa ee laga qorey waxaa ka mid ah fariin uu soo dhigey boggiisa Twitter-ka oo loo fasirtay in uu ku eedeynayay Agaasimaha Aqalka Cad Reince Priebus in uu mas’uul ka yahay wararka hoosta looga dusinayo saxaafada ee sirta ah. Balse markii dambe waa uu tirtirey qoraalkaasi.
Waa arrin sharci daro ah in dadka muwaadhiniinta ee Maraykanka ay farogashadaan arrimaha diblomaasiyadda Maraykanka, sidaasi darteedna markii la ogaaday in Flynn uu xiriir la sameeyey safiirka Ruushka, wax su’aal ah kama taagnayn in uu xilka isaga tago.
Madaxweynaha ayaa xilka ka eryay gabadhani oo lagu magacaabo Sally Yates kadib markii ay su’aal ka keentey amarkii Trump ee mabnuucista socdaalka dadka kasoo jeeda 7 dal oo muslimiin ah.
Waxaa kama dambeys xilka laga direy 19-kii Agoosto, 2016-kii.